Isitrayikhi esimva kwexesha sifumana inqaku elibalulekileyo loloyiso kungquzulwano olunamandla neSydney FC | 1xbet
Uloyiso lwaseMelbourne luphindwe kabini ngasemva ukuze luzuze umdlalo obalulekileyo we-2-2 kunye neentshaba zeSydney FC kwaye babuyela phezulu kwi-W-League kushiyeke umjikelo omnye. USam Kerr ongenakuthintelwa uba lixesha lonke ekhokela amanqaku kwi-W-League Funda ngokugqithisileyo
Umhlaseli obalaseleyo weNkanyezi uNatasha Dowie ulinganise nemizuzu eli-13 eseleyo, ebambelela kwipasi evela ku-Ella Mastrantonio ngaphambi kokudubula ekhaya. Amanqaku aphakamise icala lakhe ukusuka kwindawo yesine ukuya kweyokuqala phakathi kweleli exineneyo.
USydney ekugqibeleni wakhokela kwimizuzu eli-10 phambi kwekhefu xa uDumont wayenokukhaba kuphela indlela ebethayo ku-Alanna Kennedy.Umkhuseli waseMatildas wangcwaba isandi kwaye wabhiyozela uSocceroo Awer Mabil, nodadewabo osweleke kwingozi yemoto ngempelaveki. U-Victory u-Emily Gielnik uphinde wafaka phakathi kwamaxesha anzima. I-Facebook ku-Twitter Pinterest UCaitlin Foord ujongwe ngu Samantha Johnson eLakeside Stadium ngeCawa. Ifoto: UMike Owen / imifanekiso kaFetty
Okwangoku, iziphumo ezi-13 ezijikeleze zibonelela ngembasa yeentshatsheli ezilawulayo iMelbourne City, ethemba layo lokugcina isihloko ngoku lixhonywe ngentambo encinci.Iimbaleki ezilawule kathathu kufuneka ziphumelele kumdlalo wangoLwesine olandelayo ngokuchasene ne-Sydney FC ebekwe kwindawo yesithathu ngomgama omkhulu kwaye ndiyathemba ukuba iPerth Glory izoyiswa nzima kumjikelo wokugqibela.
Kwingqungquthela njengoko amabhongo omdlalo wokugqibela aphela kwiiklabhu ezintathu. I-Brisbane Roar igqibezele umjikelo umzuzu ngokwahluka kweenjongo, ngelixa u-Adelaide United, Canberra United kunye ne-Newcastle Jets bonke bebonile ukuba ithemba labo lokudlala licinyiwe. ngolwesihlanu. Umdlali ophumeleleyo ngomzuzu wama-91 ePanagiota Petratos uthumele i-United kwityala elibi le-2-1 ekhaya. Umdlalo wagutyungelwa ngumlenze owaphukileyo owaphathwa kukusebenzisa kukaMatildas uLarissa Crummer emva kwempixano engathandekiyo nonozinti we-United uSarah Willacy.I-Crummer ngoku imiselwe ukuba iphoswe ngumkhankaso we-Australia weNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ngoJuni. Umhlaseli kaMatildas uHayley Raso ufumene nje imizuzu eli-19 kwisiqalo sakhe sokuqala emva kokungabikho kwiinyanga ezintlanu ngenxa yokulimala kakhulu emqolo. Isiqingatha sesibini, phambi kweenjongo zika-Yuki Nagasato kunye no-Allira Toby ziwakhuphe amanqaku. Umjikelo uvulwe ngoLwesine ngefomu yePerth Glory egagamela ezantsi kwi-Western Sydney Wanderers ngo’5-1 kwisiphumo esiphelise amabhongo omdlalo owandulela owokugqibela weNewcastle Jets. USam Kerr ufikelele kwelinye inqanaba lomsebenzi obalulekileyo ngesiqingatha sesibini sokumthabathela kwi-W-League ukuya kuma-65, egqitha uMichelle Heyman njengoyena mdlali ophambili kwiligi.